विपन्‍नले कसरी बाँच्‍ने ? – bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > विपन्‍नले कसरी बाँच्‍ने ?
१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:४९ bampijhyala
१८ कार्तिक, बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । अभियन्ता बद्रीप्रसाद ढुंगाना स्वयंसेवकका साथ हरेक दिन दिउँसो २ बजे खुलामञ्च पुग्छन् । त्यहाँ भेला भएका झन्डै २ सय जनालाई निःशुल्क खाना वितरण गर्छन् । खाना खाने समूहमा कोरोना महामारीका कारण काम नपाएका र काम पाएर पनि खान धौधौ भएका मजदुरको बाहुल्य हुन्छ । अशक्त र असहाय पनि हुन्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले नागरिककै आग्रहमा निःशुल्क खाना वितरण रोक्ने निर्णय गरिएको बताए । लकडाउन खुलेपछि खुलामञ्चलगायत ठाउँमा मान्छेको आवतजावत बढेको, सवारीसाधन चल्न थालेको र बाहिर त्यतिकै खुवाउँदा शोभनीय नदेखिएकाले त्यस्ता ठाउँमा खाना वितरण रोक्नु आवश्यक भएको डंगोलको जिकिर छ ।
खुलामञ्चमा विपन्नका लागि वितरित खाना खाँदै सर्वसाधारण ।
दैनिक ज्याला – मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूलाई लकडाउनले आहत बनायो । बिहान–बेलुका छाक टार्नै धौधौ भएर छटपटिएकालाई राजधानीका खुलामञ्च, कालीमाटी, पशुपतिलगायत ठाउँमा मनकारीहरूले निःशुल्क खाना खुवाउन सुरु गरेका थिए, जुन अधिकांश क्षेत्रमा अझैं निरन्तर छ । चैत १४ गतेबाट हन्ड्रेड ग्रुपले यो पुण्यकर्म थालनी गरेको थियो । यसका संस्थापक बब्लु गुप्ताका अनुसार अहिले पनि पशुपति र खुलामञ्चमा दैनिक ४ सय जनालाई निःशुल्क खाना खुवाइन्छ ।
यसमा ‘हाम्रो सानो प्रयास’ लगायत अन्य अभियानले सहकार्य गरेका छन् । गुप्ताले पनि महानगरको निर्णयको विरोध गरे । ‘हामी दैनिक खुलामञ्च र पशुपतिमा खाना खुवाउँछौं, अहिलेसम्म महानगरपालिकाले रोकेको छैन,’ गुप्ताले भने, ‘तर, कतिपय साथीहरूलाई रोकेको र महानगरपालिकाले रोक्ने निर्णय गरेको भन्ने सुनें । हामी यसको प्रतिवाद गर्छौं ।’
हन्ड्रेड ग्रुपले खुलामञ्चमा बिहान ९ बजे र साँझ ४ बजे खाना खुवाउँछ भने पशुपतिमा साढे १२ बजे । यसका लागि समूहका झन्डै २० जना स्वयंसेवक खटिन्छन् । खानाको समस्या भएकाहरूको आग्रहमै निःशुल्क खाना वितरणलाई निरन्तरता दिइएको गुप्ताले बताए । ‘नागरिकहरू कति भोका छन् भनेर सडकमा आएर बुझ्नुपर्‍यो नि । खाना नबाँड्नु भनेर मात्र हुन्छ ?’ आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘जस्तोसुकै स्थितिमा पनि हामी खाना खुवाउन रोक्दैनौं ।
जसरी पनि खुवाउँछौं । प्रहरीले अवरोध गर्‍यो भने झडप नै हुन्छ ।’ खाना खुवाउने ठाउँमा फोहोर भए महानगरपालिकाले सफा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आफैं खाना पनि नखुवाउने, फोहोर पनि सफा नगर्ने, महानगरको के काम ?’ उनको प्रश्न छ ।
महानगरपालिकाचाहिँ जसरी पनि निःशुल्क खाना वितरण रोक्ने तयारीमा छ । यो अभियानले आफ्नो आलोचना बढाएकाले मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पहिल्यैबाट अनुदार रहँदै आएका छन् । यद्यपि प्रवक्ता डंगोलचाहिँ रोक्नभन्दा व्यवस्थित गर्न लागेको दाबी गर्छन् । महानगरले भोका नागरिकको वास्ता नगरेको भन्ने आरोपको उनले खण्डन गरे ।
उनका अनुसार लकडाउनको सुरुवाती महिनामा महानगरका सबै वडा कार्यालयले निःशुल्क खाना खुवाएका थिए । ‘मेरै १५ नम्बर वडामा दैनिक २ हजारलाई खाना खुवाएका थियौं तर नागरिकहरूले नै यसरी समूहमा खाना खुवाउन हुँदैन, संक्रमण बढ्छ भनेर गुनासो गरेपछि हामीले रोक्यौं,’ डंगोल भन्छन्, ‘नागरिकले माग गरे भने हामी फेरि खानाको व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तर, त्यस्तो माग भएको छैन ।’
बरु उल्टै डंगोलले अभियन्ताहरूलाई निहुँ नखोज्न, बरु आफूहरूसँग छलफलका लागि आउन आग्रह गरे । उनले खुला ठाउँभन्दा पार्टी प्यालेस उपयुक्त विकल्प हुने बताए । पार्टी प्यालेसहरू खाली भएकाले अभियन्ताहरूले चाहे महानगरले समन्वय गरिदिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निःशुल्क खाना खुवाउनै हुन्न, रोक्नैपर्छ भनेको होइन, व्यवस्थित गरौं भनेका हौं ।
तर, पहिले जहाँ खुवाएका हौं, त्यहीं खुवाउँछौं भनेर चल्दैन, समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ,’ डंगोलको प्रश्न छ, ‘निःशुल्क खुवाउने भन्दैमा विष्णुमतीको फोहोरको डंगुरमाथि खुवाएको ठीक हो त ? खाने र हेर्ने दुवैलाई सन्तोष हुनुपरेन ?’ आजकाे कान्तिपुर बाट
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:४९
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:४९
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:४९
अनाधिकृत रुपमा रकम संकलन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको आग्रह १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:४९
झीगु नेवाः भाय् या यें, यल व ख्वप भाषिका जक मखु कि दोलखा नेवाः भाय् , पहरिभाय्, प्यांगाभाय् थें नां जाःगु च्यागु झिगु कचा भाषिका दु । १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:४९